Ekipam-pirenen’ny tsipy kanetibe:NAHAZO 20 TAPITRISA ARIARY TAMIN’NY FILOHAM-PIRENENA -
AccueilRaharaham-pirenenaEkipam-pirenen’ny tsipy kanetibe:NAHAZO 20 TAPITRISA ARIARY TAMIN’NY FILOHAM-PIRENENA
09/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nisesy ny fahombiazan’i Madagasikara. Taorian’ny fahombiazana tamin’ny nandraisana ireo fihaonana an-tampony roa nisesy, Comesa sy Frankôfônia, mbola nandray ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany teo amin’ny taranja tsipy kanetibe ihany koa isika ka naha tompon-daka eran-tany an’i Madagasikara, tamin’ny alalan’ny ekipa nasionaly nisy an’i Nanou, Tita sy Hery ary Lova.
Araka izany, tsy nitazam-potsiny ity fahombiazan’ny ekipa nasionaly ity ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, fa nisaotra sy nankasitraka azy ireo tamin’ny fiarovana ny voninahi-pirenena ary nitondra avo dia avo an’i Madagasikara. Noraisain’ny filoham-pirenena, omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, mantsy ny ekipa nasionaly. Tamin’izany indrindra no nanoloran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina vola mitentina 20 tapitrisa Ar azy efatra mirahalahy mpilalao miampy ny mpanazatra, Dolly. Izany hoe, 4 tapitrisa Ar avy no natolotry ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny filoham-pirenena noho ny zava-bitany ka naha tompon-daka eran-tany an’i Madagasikara sy nahazoantsika ny laharana voalohany eran-tany tamin’ireo firenena 48 nifaninana teto amintsika, ny 1-4 Desambra teo iny.
Nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa tokony hitohy hatrany ny fahombiazana fa tsy mijanona hatreo akory. « Manantena aho fa tsy hijanona eo ny vokatra fa hitohy sy hivelatra amina taranja hafa ihany koa », hoy hatrany ny filoham-pirenena.
Mbola nohamafisin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa hihazakazaka manomboka izao ny fampandrosoana ny firenena.
Ankoatra izay, nambaran’ny minisitry ny Fanatanjahantena, Jean-Anicet Andriamosarisoa, fa noraisain’ny fanjakana an-tanana avokoa ny 80%-n’ny fikarakarana ny fandraisana iny fiadiana ny tompon-daka eran-tany teo amin’ny taranja tsipy kanetibe iny. Noho izany, lainga sy tsaho avokoa no naely teto amintsika fa niraviravy tanana ny fanjakana.